भारतीय अनलाइन भिसा
अमेरिकीहरूका लागि भारत भिसा
बेलायती नागरिकका लागि भारत भिसा
क्यानाडाली नागरिकका लागि भारत भिसा
अष्ट्रेलियाका नागरिकका लागि भारत भिसा
फ्रेन्च नागरिकका लागि भारत भिसा
अधिक देशहरू »
eVisa जानकारी सिंहावलोकन
भारतीय भिसा आवश्यकताहरू
भारतीय मेडिकल भिसा आवश्यकताहरू
कागजात आवश्यक छ
प्रविष्टि को अधिकृत पोर्ट
बाहिर निस्किने पोर्टहरू
क्रूज शिप यात्रीहरू
पासपोर्टबाट भिसा आवश्यकताहरू
मेडिकल एटेंडेंट भिसा
भारत भिसा अनलाइन प्राप्त गर्नुहोस्
भारत भिसा आवेदन के हो
भिसा आवेदन प्रक्रिया -
व्यापार भिसा यात्रीहरू
भिसा अस्वीकृतिबाट बच्नका लागि सल्लाहहरू
भिसा फोटो आवश्यकताहरु
भिसा पासपोर्ट आवश्यकताहरू
अमेरिकाबाट भिसाका लागि आवेदन दिँदै
ब्रिटिश नागरिकका लागि भारतीय भिसा
दिल्ली एयरपोर्टमा आगमन
भारत पर्यटक भिसा फेरि खुल्छ
भारत भिसा नीति अपडेट
भारत अनलाइन भिसा पुनर्स्थापित
भारत भ्रमण गर्ने खोप
भारतीय दूतावासहरूको सूची
भारतमा विदेशी दूतावासहरू
OCI का लागि भिसा नीति
बच्चाहरूको लागि भिसा नीति
COVID-19 भिसा नीति
भाषा चयन गर्नुहोस्अंग्रेजीफ्रान्सेलीजर्मनइटालियनजापानीस्पेनिशनर्वेजियनडेनिसडचस्विडिशपलिशफिनिसग्रीकरूसीचिनियाँ (सरलीकृत)अरबीबुल्गेरियालीकातालानचिनियाँ (परम्परागत)क्रोएसियालीचेकफिलिपिनोहिब्रूहिन्दीकोरियालीपुर्तगालीरोमानियालीइन्डोनेसियालीलातवियाईलिथुआनियनसर्बियनस्लोभाकस्लोभेनियालीयुक्रेनीभियतनामीअल्बेनियन्इस्टोनियालीगलिसियालीहंगेरीमालटिस्थाईटर्कीफारसीअफ्रिकीमलायास्वाहिलीआइरिसवेल्शबेलारुसीआइसल्यान्डिकम्यासेडोनियनयिद्दिसआर्मेनियालीअजरबैजानीबास्कजोरजियनHaitian Creoleउर्दूबंगालीबोस्नियालीसेबुआनोएस्पेरान्तोगुजरातीहोउसाह्मोङईग्बोजाभीकन्नडखमेरलाओल्याटिनमाओरीमराठीमङ्गोलियननेपालीपंजाबीसोमालीतामिलतेलुगुयोरूबाजुलुम्यानमार (बर्मा)चिचेवाकजाखमालागासीमलयालमसिंहलीसेसोथोसुडानीताजिकउज़्बेकअम्हारिककोर्सिकालीफ्रिजीयनहवाईकुर्दिस (Kurmanji)किर्गिजलक्जमबर्गिशPashtoसामोअनस्कटिश गाएलिकशोनासिन्धीहोसा
कसरी भारत भिसा अनलाइन प्राप्त गर्ने?
भारतको भिसा नीति निरन्तर विकास हुँदैछ र बढ्दो आत्म-अनुप्रयोग र अनलाइन च्यानलको दिशामा बढिरहेको छ। भारतको भिसा स्थानीय भारतीय मिशन वा भारतीय दूतावासबाट मात्र उपलब्ध थियो। यो इन्टरनेट, स्मार्ट फोन र आधुनिक संचार च्यानलको व्यापकता संग परिवर्तन भएको छ। अधिकांश उद्देश्यका लागि भारत भिसा अब अनलाइन उपलब्ध छ।
यदि तपाइँ भारत भ्रमण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए सब भन्दा सुविधाजनक विधि अनलाइन लागू.
भारतमा आगन्तुक आउनुको कारण अर्थात् उनीहरुको राष्ट्रियता र आगन्तुक कुन उद्देश्यका लागि आउन चाहन्छ भन्ने आधारमा भिसाका विभिन्न कक्षाहरू छन्। तर, द2पक्षहरूले तपाइँ अनलाइन भारत भिसाको लागि योग्य हुनुहुनेछ कि भनेर निर्णय गर्दछ। यी2हो:
राष्ट्रियता / राहदानीमा नागरिकता, र
आशय वा यात्राको उद्देश्य
भारतीय भिसा अनलाइनका लागि नागरिकता मापदण्ड
भारतमा यात्रुको नागरिकताको आधारमा भिसाका निम्न प्रकारहरू छन्:
माल्दिभ्स र नेपाल जस्तो भिसा मुक्त देशहरू।
सीमित समय र सीमित एयरपोर्टहरूको लागि भिसा अन आगमन देशहरू।
eVisa भारत देशहरू (नागरिकबाट १ countries० देशहरू योग्य छन् भारतीय अनलाइन भिसाका लागि)।
कागज वा पारम्परिक भिसा आवश्यक देशहरू।
सरकार क्लियरन्सका लागि पाकिस्तान जस्ता देशहरू आवश्यक छ।
सब भन्दा सुविधाजनक, भरपर्दो, सुरक्षित र विश्वासिलो तरीका भनेको भारतीय भिसा अनलाइन वा eVIS भारतका लागि आवेदन दिनु हो जुन यी विस्तृत कोटीहरूमा अन्तर्गत उपलब्ध छ, भारत पर्यटक भिसा, भारत व्यापार भिसा, भारत मेडिकल भिसा र भारत मेडिकल उपस्थिति भिसा.
तपाईं भारतको लागि भिसा प्रकारहरूको बारेमा बढी पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ.
भारत भिसा अनलाइन को लागी आशय मापदण्ड
यदि तपाईंले पहिलो परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको छ र इलेक्ट्रॉनिक भारतीय भिसा अनलाइन वा eVisa भारतको लागि योग्य हुनुहुन्छ भने, तपाईं यात्राको उद्देश्यले तपाईंलाई भारतको इलेक्ट्रोनिक भिसाको लागि योग्य बनाउँछ कि भनेर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं जाँच गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईं अनलाइन भारत भिसाका लागि आवेदन दिन योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। यदि तपाईंको अभिप्राय यदि तल उल्लेखित मध्ये कुनै एक उल्लेख गरिएको छ भने, तपाईं भारत भ्रमण गर्न भिसाका लागि यो वेबसाइटमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।
तपाईंको यात्रा मनोरन्जनको लागि हो।
तपाईंको यात्रा दृश्य हेर्नका लागि हो।
तपाईं परिवारका सदस्यहरू र आफन्तहरूलाई भेट्न आउदै हुनुहुन्छ।
तपाईं साथीहरूलाई भेट्न भारतको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईं योग कार्यक्रममा भाग लिइरहनुभएको छ।
तपाई6महिना भन्दा बढीको कोर्स र डिग्री वा डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान नगर्ने कोर्समा भाग लिदै हुनुहुन्छ।
तपाईं १ महिना अवधिको लागि एक स्वयम्सेवक काम गर्दै हुनुहुन्छ।
यदि तपाईं माथिको कुनै पनि उद्देश्यका लागि भारत भ्रमण गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ भारतको लागि भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस् eVisa भारत पर्यटक कोटी अन्तर्गत।
यदि तपाईंको उद्देश्य निम्न मध्ये एक हो भने, त्यसो भए तपाईं eVIS India को लागि पनि योग्य हुनुहुनेछ (व्यवसाय कोटी अन्तर्गत) र भारतीय भिसा अनलाइनका लागि यस वेबसाइटमा आवेदन दिनुहोस्।
एक औद्योगिक परिसर स्थापना गर्न तपाईंको भ्रमणको उद्देश्य।
तपाईं आउन आउँदै हुनुहुन्छ, मध्यस्थता गर्न, पूर्ण गर्न वा एक व्यापार उद्यमको साथ जारी राख्न।
तपाईंको भ्रमण भारतमा वस्तु वा सेवा वा उत्पादन बेच्नको लागि हो।
तपाईंको भारतीयबाट आवश्यक उत्पादन वा सेवा आवश्यक छ र भारतबाट खरीद गर्न वा खरीद गर्न वा खरीद गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ।
तपाईं व्यापार गतिविधि मा संलग्न गर्न चाहानुहुन्छ।
तपाईंले भारतबाट कर्मचारी वा जनशक्ति भर्ती गर्न आवश्यक छ।
तपाईं प्रदर्शनी वा व्यापार मेला, ट्रेड शो, व्यापार शिखर सम्मेलन वा व्यापार सम्मेलनमा भाग लिदै हुनुहुन्छ।
तपाईं भारतमा नयाँ वा चलिरहेको प्रोजेक्टको लागि विशेषज्ञ वा विशेषज्ञको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाई भारतमा भ्रमणहरू गर्न चाहानुहुन्छ।
तपाइँसँग तपाइँको भ्रमणमा डेलिभर गर्न को लागी एक lecure / s छ।
यदि माथिका कुनै पनि आशय तपाइँलाई लागु हुन्छ, तब तपाइँ एक eVisa भारत को लागी योग्य हुन र योग्य हुन भारतको लागि भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस् यस वेबसाइटमा।
थप रूपमा, यदि तपाईं आफैंको लागि चिकित्सा उपचारको लागि भारत भ्रमण गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं यो वेबसाइटमा भारत भिसा अनलाइनको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं बिरामीसँगै जान चाहनुहुन्छ भने नर्स वा सहयोगीको रूपमा व्यवहार गर्नुहोस्, त्यसोभए तपाईं यस वेबसाइटमा मेडिकल एटेन्डन्ट वर्ग अन्तर्गत भारतको भिसाका लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।
तपाईं कहिले भारत भिसा अनलाइन को लागी योग्य हुनुहुन्न?
त्यहाँ परिस्थितिहरू हुन्छन् जहाँ तपाईं दुबै मापदण्ड अन्तर्गत योग्य हुनुहुन्छ तर अझै तपाईंलाई eVIS इंडिया वा भारतीय अनलाइन भिसा दिइने छैन यदि तपाईंलाई तल दिइन्छ भने।
तपाईं एक सामान्य राहदानीको सट्टा एक कूटनीतिक पासपोर्ट अन्तर्गत आवेदन गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईं पत्रकारिता गतिविधिहरू गर्न वा भारतमा फिल्महरू बनाउने योजना गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईं प्रचार वा मिसनरी कार्यको लागि आउदै हुनुहुन्छ।
तपाईं १ term० दिन भन्दा बढि लामो अवधिको लागि आउँदै हुनुहुन्छ।
यदि अघिल्लो कुनै पनि कुरा तपाइँलाई लागू हुन्छ भने तपाइँले नजिकको भारतीय दूतावास / वाणिज्य दूतावास वा भारतीय उच्चायोगको भ्रमण गरेर भारतको लागि नियमित कागज / पारंपरिक भिसाका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ।
भारत भिसा अनलाइन को सीमितता के हो?
यदि तपाईं एक eVisa भारतीय को लागी योग्य हुनुहुन्छ र एक भारतीय भिसा अनलाइन को लागी आवेदन गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने, तपाईं सीमितता को बारे मा सचेत हुनु पर्छ।
भारतीय भिसा अनलाइन वा eVisa भारत केवल3अवधिहरू पर्यटक उद्देश्यका लागि मात्र उपलब्ध छ, 30 दिन, 1 वर्ष र5वर्ष।
भारत भिसा अनलाइन व्यापार उद्देश्यका लागि १ बर्षको एकल अवधिको लागि मात्र उपलब्ध छ।
भारतीय भिसा अनलाइन वा eVisa भारत चिकित्सा उद्देश्यका लागि 60 दिनको लागि उपलब्ध छ। यसले भारतमा3प्रविष्टिहरूलाई अनुमति दिन्छ।
भारत भिसा अनलाइनले एयरपोर्ट, २ Airports एयरपोर्ट र se बन्दरगाहबाट सीमित प्रवेश पोर्टहरूको सेटमा प्रवेश अनुमति दिन्छ।यहाँ पूर्ण सूची हेर्नुहोस्)। यदि तपाईं सडकमा भारतीय भ्रमण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले यो वेबसाइट प्रयोग गरेर भारत भिसाका लागि आवेदन दिनु हुँदैन।
eVisa भारत वा भारतीय भिसा अनलाइन सैन्य शिविर क्षेत्रहरूमा भ्रमणको लागि योग्य छैन। तपाईंले संरक्षित क्षेत्र अनुमति र / वा प्रतिबन्धित क्षेत्र अनुमतिको लागि आवेदन दिन आवश्यक छ।
भारतको लागि इलेक्ट्रोनिक भिसा भारतमा प्रवेश पाउने सब भन्दा छिटो तरीका हो यदि तपाईं क्रूज वा एयर द्वारा भ्रमणको योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने। यदि तपाईं १ 180० देशहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ जुन eVisa भारत योग्य हो र माथि वर्णन गरिएको इरादा मिलान गरिएको छ भने, तपाईं यहाँ भारत भिसाका लागि अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले जाँच गर्नुभयो तपाईंको भारत eVIS का लागि योग्यता.
संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिकहरू, युनाइटेड किंगडमका नागरिकहरू, क्यानाडा नागरिकहरू र फ्रान्सेली नागरिकहरू गर्न सक्छन् भारत eVIS का लागि अनलाइन आवेदन गर्नुहोस्.
तपाईंको उडानको advance-4 दिन अगाडि भारत भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस्।
भारत eVisa अनुप्रयोग
eVISA भारत जानकारी
इविसा इलिजिबल देशहरू
कागजातहरू आवश्यक छ
EMEDICAL ATENTENDANT VISA
eVISA VISITOR जानकारी
eVISA फोटो आवश्यकताहरू
भिसा पासपोर्ट आवश्यकता
प्रविष्टि को प्रमाणित पोर्टलहरू
बाहिर निस्कनको प्रमाणित पोर्टलहरू
भिसा मिति अन्वेषण
ARRIVAL मा भिसा
तत्काल भारतीय भिसा
भिसा अस्वीकारबाट बच्ने सल्लाहहरू
व्यवसाय भिसा ट्रेलरहरू
eVISA आवेदन प्रक्रिया
भारत EVISA नवीकरण गर्नुहोस्
अमेरिकाबाट EVISA का लागि आवेदन
प्रसिद्ध भारतीय स्मारकहरू
बन्धर्वगढ राष्ट्रिय पार्क
भगवानहरुको देश केरला
प्रसिद्ध भारतीय खाना
यूनेस्को विरासत साइटहरु देख्नु पर्छ
प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य
प्रसिद्ध भारतीय मिठाईहरू
ताज महल भ्रमण गर्दै
GOA मा पूर्ण गाईड
MUSSOORIE र अरुणाचल
HUIDIDAYING MUSSOORIE मा
मुम्बई यात्रा गाइड
अप्रिय तामिल नाडू
कच्छ सेतो DESERT को दौड
अण्डमान र निकोबार द्वीप
मेघालयको लागि पर्यटक गाइड
दक्षिण भारत हेर्नु पर्छ
© www.indiavisa-online.org द्वारा प्रतिलिपि अधिकार
अस्वीकरण: यस व्यावसायिक वेबसाइटद्वारा जारी गरिएको भारतीय भिसा सिधै भारत सरकारको अध्यागमन कार्यालयमा लागू हुन्छ। भारत सरकारले www.indiavisa-online.org लाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष वा विशेष रूपमा नियुक्त गरेको छैन। हाम्रा सेवाहरू र यस वेबसाइटमा आवेदन गर्नेहरूका लागि सरकारी भिसा शुल्कको लागि व्यावसायिक शुल्क लगाइन्छ।